Salaisuuden - Fince - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: salaisuuden (Fince - Birmanca)
vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.
ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ် စင်ကြယ်သည်နှင့်၊ ယုံကြည်ခြင်း၏ နက်နဲသောအရာကို စွဲလမ်းသောသူ ဖြစ်ရကြမည်။
Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla luotettava henki on, se säilyttää asian.
လည်၍စကားများစွာ ပြောတတ်သောသူသည် လျှို့ဝှက်အပ်သောအရာကို ဘော်ပြတတ်၏။ သစ္စာစောင့် သောသူမူကာ၊ ဝှက်ထားတတ်၏။
နက်နဲသော အရာတခုကိုငါပြဦးမည်။ ငါတို့ ရှိသမျှသည် အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်။
tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä -
ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,
että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဝှက်ထားလျက်ရှိသော ထိုအဓမ္မအရာသည် ယခုပင် ပြုပြင်ဆဲရှိ၏။ သို့သော်လည်း ဆီးတားသောသူသည် ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ မရောက်မှီတိုင်အောင် ဆီးတားလိမ့်မည်။
ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
ငါ့လက်ျာလက်၌ ထင်ရှားသောကြယ်ခုနှစ်လုံးနှင့်ရွှေမီးခွက် ခုနှစ်လုံး၏ နက်နဲခြင်းအရာဟူမူကား၊ မီးခွက်ခုနှစ်လုံးသည်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဖြစ်၏။ ကြယ်ခုနှစ်လုံးသည်လည်းထိုခုနှစ်ပါးသော အသင်းတော် တို့ကို အုပ်သောတမန်ဖြစ်ကြ၏။
ကိုယ်တော်က၊ သင်တို့သည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏နက်နဲသောအရာကို သိရသောအခွင့်ရှိကြ၏။
että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;
pakistan (Fince>Estonca)buenos notches (İspanyolca>Fransızca)holy (Fransızca>İngilizce)للتعليم (Arapça>İngilizce)rinascero (İtalyanca>Almanca)ave satanas (Latince>Rusça)guest chale gaye kya (Hintçe>İngilizce)swasta multinasional (Malayca>İngilizce)rovinavano (İtalyanca>İngilizce)aliporudi (Svahili>Çekçe)klettern (Almanca>Lehçe)ami hablame en espanol y bn (İspanyolca>İngilizce)szüntelen (Macarca>Arapça)selamat malam semonga mimpi indah (Endonezce>İngilizce)sisäpiiristä (Fince>Vietnamca)újraellenőrzése (Macarca>İngilizce)true juniors (İngilizce>Tamilce)jethani ki ladki ko kya kahte h (Hintçe>İngilizce)kaçacaksınız (Türkçe>Svahili)dissoluta (Latince>Birmanca)what is the meaning nakagisnan (İngilizce>Tagalogca)ego linguam latinam (Latince>İngilizce)main tumko nahi bhul sakta (Hintçe>İngilizce)infliksimaba (Hırvatça>İngilizce)rat ke 12 baj gye hai (Hintçe>İngilizce)